Igumbi elise- indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguSimon
USimon unezimvo eziyi-37 zezinye iindawo.
USimon ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-92% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uSimon iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iflethi eyi-50 m2 embindini weCakocak emangalisayo, kufutshane nepaki kunye nesixeko esidala. Iflethi inazo zonke izixhobo ibe inazo zonke izinto ozidingayo ukuze ukhululeke kwaye ukonwabele ukuhlala kuyo. Kwisakhiwo esifanayo kukho nevenkile yokutyela kunye nevenkile yokutyela ekhethekileyo enikezela ngenkonzo yesidlo sakusasa kwiindwendwe zethu.
Ababuki zindwendwe bakwinkonzo yakho ukuze uhlale kamnandi ibe bangakunika yonke inkcazelo oyidingayo. Uhamba ngeenyawo, unokutyelela isixeko sonke, kwaye sinokulungiselela ezothutho kunye neenqwelo-moya ukuze undwendwele yonke indawo entle ekuthiwa yi-Me Imperimurje.
Ukuba ukhetha indawo yethu yokuhlala, uya kuba nentuthuzelo kunye noxolo, kwaye ube yimizuzu embalwa yokuhamba ukusuka kuzo zonke izibonelelo ezibalulekileyo ezinikezelwa sisixeko. Kummandla okufutshane yiMyuziyam yaseMeđimurje, iZiko leNkcubeko, iCawa yaseSt. UNikola kunye neekhefi ezininzi kunye neeresityu.
Amafulethi ethu ahonjiswe ngendlela yanamhlanje, kodwa umoya ushushu kwaye "usekhaya" ngaxeshanye. Kukho ukukhanya kwemini okuninzi kuyo yonke indawo kwaye kunomoya kwaye kukhululekile, kwaye ukugquma okulungileyo kukhusela kwingxolo yangaphandle.
I-Shiatsu massage iyafumaneka kwiindwendwe zethu, kunye neenkqubo zokuzilolonga kwindawo ye-Hara Studio, nakwi-Čakovec.
Gosti slobodno koriste sve prostorije u stanu koji se sastoji od spavaće sobe, dnevne sobe, kuhinje, kupaone i wc-a. Također mogu popiti piće u kavani koja se nalazi u prizemlju zgrade ili pojesti ukusan obrok u restoranu Pozoj smještenom u podrumu.
I-Čakovec yidolophu apho yonke into iqhuma ubomi kunye nokuhleka kwabantwana, isixeko apho uya kuziva ukhuselekile kwaye ukhuselekile. Kufuphi ungazihlaziya kumachibi esixeko okanye uhambe uye eMeđimurje ephezulu kwaye ufumane ukuphumla eSt. Martin Spa. Kwi-Međimurje esezantsi nangaphezulu kukho iifama ezininzi zeentsapho kunye nokhenketho lwasemaphandleni kunye nokutya kwasekhaya. I-Gornje Međimurje yindawo yediliya egqame kwimephu ye-eno yaseCroatia ngokunikezela ngekhwalithi ephezulu, uninzi lwewayini ezimhlophe. Thatha indlela ye-Međimurje yewayini kwaye ufumane into oyithandayo.
Ababuki zindwendwe bakwinkonzo yakho ukuze uhlale kamnandi ibe ba…
4.83 (iingxelo zokuhlola 6)
Ul. Matice hrvatske 6, 40000, Čakovec, Croatia
Isakhiwo apho le ndlu ikhoyo iqulathe iiyunithi zokuhlala ezi-5 ezongezelelekileyo ezilungiselelwe irenti yabakhenkethi. Ukongeza, njengomxholo owongezelelweyo, ngaphakathi kwesakhiwo kukho ikhefi engenangxolo kwaye itsala umxhasi ozolileyo kunye nevenkile yokutyela apho iindwendwe zethu zinokutyela khona.
Sifumaneka kwiindwendwe zethu ngonxibelelwano ngeselula okanye i-imeyile kunye noqhagamshelwano lobuqu ukuba iindwendwe zinqwenela. Sikulungele ukubabonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu kunye nalo lonke ulwazi oluyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Čakovec